(SAWIRO) Shacabka Godob-jiraan oo si isku tashi ah u dhisanaya waddo 50km ah. | puntlandi.com
Shacabka degmada Godob-jiraan ee gobolka Nugaal oo kaashanaya maamulkooda ayaa meel wanaagsan marinaya dhismaha waddo dhererkeedu yahay 57km oo jid caddo ah.
Waddadaan ayaa haatan la dhameystiray qeyb kamid ah, waxayna isku furtay degmada Godob-jiraan iyo tuulooyin badan oo awal hore uusan gaadiidku gali karin sababo la xiriira waddo la’aan. Hirgalinta Jidkaan ayaa fududayndoona in tuulooyin badan oo abaaraha ay saameyeen la gaarsiiyo gurmadka biyo dhaamiska iyo mucaawinooyinka loogu talo galay dadka ku nool tuulooyinkaas.
Dadka degaanka ayaa si iskutashi ah u dhisanaya jidkaan kadib markii la ogaaday baahida loo qabo in la helo waddo isku xirta degmada Godob iyo tuulooyinka hoos yimaada. Guddoomiyaha degmada Godob, Axmed Siciid Maxamed ayaa Puntlandi u sheegay in qarashka lagu dhisayo Waddadaan uu yahay xoolo lagasoo aruuriyay dadka degaanka iyo ciidanka degmada oo xooggooda ku tabarucay.
Waxaa uu guddoomiyuhu sheegay in booyada biyaha ah markii hore tuulooyinka lagu gayn jiray lacag $500, balse haatan wuxuu sheegay inay hoos u dhacday oo ay gaartay $100 halkii booyad, sidoo kale wuxuu sheegay dumarka Uurka leh ee tuulooyinka ku dhaqan inay xaalado adag kala kulmi jireen waddo la’aanta.